Mandenze ntoni xa umntwana wam ofikisayo engandihloniphi | Amadoda aseStylish
UAlicia tomero | 05/11/2021 22:43 | Ukuhlaziywa ukuba 07/11/2021 13:17 | Ukunyamekela
Siyazi kuqala ukuba injani na inqanaba le ukufikisa. Ngaphandle kokuya phambili, thina ngokwethu siphile esi sigaba ngobunzima. Bonke abantwana xa befikelela kweli nqanaba ngokwesiqhelo jongana nayo ngeyona ndlela ilungileyoNangona abanye abazali kufuneka bajongane nombuzo othi 'ungenza ntoni xa umntwana wakho ofikisayo ekudelela'.
Ootata noomama sizibuza imibuzo emininzi, asazi ukuba ingxaki ilapha kuthi, ukuba imfundo yethu ikuyo na ukuvumela kakhulu okanye ukuba abantwana banohlobo oluthile ukuziphatha ukuphazamiseka. Ngaphandle kwamathandabuzo, isizukulwana ngasinye esiza ngaphambi kwesinye sisoloko sigxeka eso sangaphambili. Kusoloko kuxoxwa ukuba ngaba ulutsha lwanamhlanje aluhloniphi nto, kodwa kwisizukulwana ngasinye eli binzana liyaqhubeka ekuhambeni kwexesha.
1 Iziphumo zokuziphatha kolutsha
2 Ungenza njani xa umntwana wakho engakuhloniphi?
Iziphumo zokuziphatha kolutsha
Abafikisayo banenqanaba elinzima lokukwazi ukubonelela ngazo zonke izinto zabo utshintsho emzimbeni nasengqondweni. Lixesha apho bafuna ukuzakhela ubuni babo kwaye bafuna ukwenza oko ngokuzimela ngokupheleleyo. Naphi na apho sasibona abantwana benamathele kubazali babo, ngoku babona ihlabathi elahlukileyo ngaphandle kwamakhaya abo. Yonke into abayibonayo kwezinye iintsapho baya kufuna ukumelwa nakwikhaya labo kwaye kungoko baqala ukugxeka yonke into abasoloko beyazi.
Iilobe ezingaphambili zolutsha qala ukuguqula kwaye iya kuba yinxalenye yokugqibela egqiba ukukhula, kungoko basenohlobo oluthile Impixano ekuvuthweni kwayo. Abakwishumi elivisayo badla ngokuziva bengazinzanga yaye bengaqondwa kakuhle yaye uninzi lwabo luguqula isimo sengqondo sabo sibe yimvukelo.
Into ekufuneka icaciswe kukuba unako ngamaxesha onke ukufikelela kwingxoxo phakathi kwabazali nabantwana. Ukuba umntwana ofikisayo uyaqhankqalaza, kufuneka umphulaphule kwaye umvumele abe nomsindo ukuba ufuna, unelungelo lonke. Eyona nto imbi kakhulu xa ungenayo loo reaction yendalo kwaye ufikelela kuyo ukungahloniphi kunye nobundlobongela.
Ungenza njani xa umntwana wakho engakuhloniphi?
Into ebalulekileyo kukwazi indlela yokusabela xa umntwana wakho uyaliphakamisa ilizwi lakhe kwaye akakuhloniphi. Akunyanzelekanga ukuba udibane naye kuba loo nto ayizi kusombulula izinto okwangoku, kodwa iya kuba mbi ngakumbi. Kukhubekisa kakhulu xa owakho umntwana ekuthuka, ethetha amazwi abuhlungu okanye akwenza ube nendelelo enkulu. Uyise okanye umama ozolileyo ebusweni bokusabela okunjalo uya kubenza bangafanelanga izicwangciso kunye uzive uzolile noko.
Ingxoxo yeyona ibalulekileyo njengomfowunelwa. Kufuneka ucinge ukuba ukuziphatha kwabo yinto engeyiyo entsha, ngoko kufuneka ube namandla okuzama ukuqonda umzuzu. Kodwa ungamvumeli ukuba abaleke okanye akunyathele, kufuneka ubonise ukuba ngubani onegunya kwaye kutheni.
Apha ungaqhubeka ukutyala izohlwayo ezincinci, Ekubeni njengayo nayiphi na ingqumbo kumntwana omncinci, ukuba isisombululo asithathwanga, siya kuphinda siphinde. Zibeke kwindima kamama okanye katata kwaye uphinda ukuba imida nemithetho ibekelwe ukulungelwa komntu wonke. Ukuba umntwana wakho wenza izinto ezingalunganga kwaye akakuhloniphi, kuya kuba nemiphumo, kodwa into yokuba enze ngolu hlobo ilungele yena. Ukusuka apha kufuneka kucaciswe ukuba into ekujongwe ukuba yenziwe yileya kwixesha elizayo ube ngumntu ongcono.
Ngelixa lomsindo omkhulu, ukuba umntwana wakho uyakuthuka, musa ukwenza okufanayo. Ayiyi kuba yeyona ndlela ilungileyo yokunxibelelana zama ukumela umothuko wakho ukuvakalisa amabinzana afana nelithi “Musa ukuthetha nam ngolo hlobo, kuba kubuhlungu,” endaweni yokuqhubeka ngamabinzana abi okanye aburlesque.
Kodwa nawe ungagobi ngokusoloko udlala ixhoba kwaye umvumele abone ukuba unexesha elibi. Kufuneka womelele ngokweemvakalelo. Ukuba umntwana wakho uyakubona ukuba uyanikezela okanye ubona ukuba ubuthathaka, uya kusoloko enaloo ndlela ukuze akwazi ukubonisa ukungabi nantlonelo kwakhona yaye uya kusoloko ebaleka.
Ukuphulaphula umntwana wakho yeyona ndlela ilungileyoUkuba uqinisa intlonipho ekugqibeleni baya kufuna ukuziphatha ngendlela efanayo, kodwa ekuhambeni kwexesha. Unokumbuza ukuba kutheni into eyenza ukuba abe nomsindo kwaye hlalutya apho ingxaki ikhoyo. Ukuba uyakuphulaphula, uya kukwazi ukuba yindlela efanelekileyo yokufumana isisombululo kumsindo onjalo, kwaye yintoni engcono kwisandla soyise okanye umama oyingcali.
Unxibelelwano olukhoyo luya kuhlala luyeyona ndlela inokwenzeka yokuba yonke into ihlale phantsi, ukuba ubeka umdla wakho kuyo, ekuhambeni kwexesha iya kuyijonga nakuwe. Umonde yeyona nto iphambili ukuze udlule kuloo mzuzu ubuhlungu, kodwa ekuhambeni kwexesha unokufikelela esiphelweni esihle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Yintoni emandiyenze xa umntwana wam ofikisayo engandihloniphi